Archive du 20200115
Antananarivo renivohitra Hotanterahana rahampitso ny famindram-pahefana
Hotanterahina rahampitso alakamisy 16 janoary amin’ny 10ora maraina etsy amin’ny Parvis Analakely ny lanonana fifamindram-pahefana eo amin’ny ben’ny tanàna teo aloha Rtoa Lalao
TAMAMI Tsy afa-miala amin’ny krizy politika ny praiminisitra Ntsay
Mila olona mahitsy sy mazava ny firenentsika, hoy ny antoko “TAnora MAlagasy MIroso”tarihin’ny filoha nasionaliny Atoa Samihary Floriot omaly.
Governemanta Minisitra 8 no hotazonina…
Ho feno herintaona katroka amin’ny 24 janoary izao ny nitsanganan’ny governemanta voalohany tato anatin’ny fanjakana Rajoelina.
AVI Hanao fihaonam-be nasionaly
Antoko efa nangina nefa manohana ny fitondram-panjakana ny antoko AVI (Asa Vita no Ifampitsarana)
Fanapahana nataon’ny filoha Nitory eny amin’ny HCC ny Antenimierandoholona
Manoloana ny fisian’ny tsy fanajana ny lalàna velona misy eto Madagasikara, izay ataon’ireo mpanatanteraka dia nametraka fitoriana
Edito Maty paika !
Misasaka sahady ity ny volana janoary. Be izay hita tao anatiny izay.
Olan’ny toekarena malagasy « Ny sain’ny mpianatra toekarena mihitsy no nosimbana »
Tsy misy manana tombontsoa amin’ny hisian’ny ady na ny iranianina na irakianina ary samy matahotra izany ny roa tonta,
Seranam-piaramanidin’i Nosy be Mifoha indray ny raharaha 2004
Anisan’ny fitaratra ho an’i Madagasikara i Nosy be ary anton’izay dia noho ny hatsaran’ireo mponina sy ny fotodrafitrasa ary ny zava-misy
Minisiteran’ny fampianarana ambony Notoloran’i India boky miisa 100 000
Boky fianarana manodidina ny 100 000 ahitana lohateny 37 no natolotry ny governemanta indiana ho an’ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa.
Zon`ny mpanjifa “Tsy hitsahatra hampaneno lakolosy”
“Maro ireo fitarainana voaray avy amin`ny mpanjifa kanefa manana lalàna miaro ny mpanjifa i Madagasikara”, hoy Rabetsara Lita, filohan`ny fikambanana nasionaly miaro ny zon`ny mpanjifa (RNDC).
Kaominina Itaosy “Hanamafy ny fanabeazana olom-pirenena”
“Fanohizana ny asam-pandrosoana izay misy eny amin`ny kaominina no hatao voalohany.
Fanesorana mpiasan’ny ORTM “Misy fandikan-dalàna mihoapampana”
Mbola mangotraka ny raharaha mahakasika ny haino aman-jerim-panjakana.
Fanarahamaso ireo fiara fitaterana 50 000 Ar isam-bolana ny saran’ny fametrahana GPS
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny PK0 Antanimena ny mahakasika ny tolotra GPS apetraka amin’ny fiara.
JIRAMA Nisokatra omaly ny “sous-caisse” Manakambahiny
Miezaka manakaiky kokoa hatrany ny mpanjifa ny orinasa JIRAMA. Nisy omaly talata 14 janoary ny fanokafana « sous-caisse » vaovao etsy Manakambahiny.
Ankizy tsy hita teny Itaosy Izay vao nipoitra ny tena marina
Izao vao tena fantatra ny marina mahakasika ireo ankizy telo mianadahy very teny Itaosy ny herinandro lasa teo ary efa hita soa aman-tsara. Rangahy iray izay tsy fantatr’izy ireo no nolazainy tamin-dReniny fa nanambitamby vola azy ary nitaona azy ireo mba hanaraka azy.
Mahabo Ambohidratrimo Hatao fitaratra amin’ny fanampiana ireo zanaky ny tantsaha
Hatao fitaratra amin’ny fanohanana ireo ankizy zanaka tantsaha ny kaominina Mahabo, distrikan’Ambohidratrimo.
Lakandranon’i Mozambika Mety hisy rivodoza hiforona indray
Ny tsioka avy avaratra na avaratra andrefana no hamaritra ny andro eto Madagasikara ary arahina fandalovana andian-drahona izany amin’ny faritra Atsimo amin’ny fiafaran’ny herinandro,
Ambositra Karohina fatratra ireo mpamatsy sy mpandray taolam-paty
Ao anatin’ny famotorana tanteraka ny mpitandro filaminana mahakasika ireo telo lahy tratra nitondra taolam-paty 5 sakôsy.
Polisim-pirenena Hitohy ny fanadiovana amin’ny kolikoly
Nahitam-pahombiazana ny mpitandro filaminana nanakaiky ny vahoaka na “police de proximité ».
Fanamorana ny varotra sy fandraharahana Vola 39,2 tapitrisa Euro no azon’i Madagasikara
Notanterahina omaly tetsy amin’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny fitantanam-bola Antaninarenina ny fifanaovan-tsonia fiaraha-miasa amin’ny Banky Afrikanina ho amin’ny Fampandrosoana (BAD) sy ny Vondrona Eoropeanina ary ny Governemanta Malagasy.
Tranoben’ny varotra eto Antananarivo Hankalaza ny faha-100 taona
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny tranoben’ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo, etsy Antaninarenina, omaly fa feno 100 taona amin’ity taona 2020 ity izany tranobe izany.
Fanendahana teny Mahamasina Telo lahy nifanenjehana ary voasambotra teny Andohalo
Mpisam na mpanao “cent mètre” ara-bakiteny tokoa ireo jiolahy telo lahy izay nifanenjehan’ny polisy tamin’ny tohatohabato “Razafindrazay” na 416 araka ny ny isany.
Antsirabe Tratra ilay trafikana volamena 128 tapitrisa ariary
Tao amin’ny zaodahiny no nisitrika ilay mpiasa nangalatra volamena milanja 829g.